mashiinka dhalada kulul, mashiinka shaashadda kulul ee loogu talagalay dhinaca sare, mashiinka mashi-HCmachine-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Somali mashiinka dhalada kulul, mashiinka shaashadda kulul ee loogu talagalay dhinaca sare, mashiinka mashi
Isticmaal: Mashiinka dhalada ee otomaatiga ah ee mashiinka shaashadda kulul waxaa loogu talagalay in si buuxda loogu shubo foornada foornada ee ku wareegsan kuwa ku wareegsan iyo kuwa aan joogto ahayn. Waxay ku daabaceysaa dhinaca dhalada ee dhalada.
HC-HA-CapC Aaladda mashiinka shaashadda
1: Isticmaalka dhammaantiis Wattage: 2.2KW;
2. Taabashada heerkulka Range: 20-300 ° C;
3. Ku cadaadi cadaadiska hawada Cadaadiska: 0.6MPA;
4. Qalabka Dhismaha: DIA: 15-34MM L: 25-60MM
5. Xadhiga ugu sareeya Xawaaraha: 4200pcs / saac
6. Heerka dhererka: 210 * 140 * 230CM
7. Miisaanka saafiga ah: 800KG
wax soo saarka www.hc-printing-machine.com, email: hcprinter@hotmail.com